Ampidino ESET NOD32 Antivirus 2021 ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (55.00 MB)
Ampidino ESET NOD32 Antivirus 2021,
ESET NOD32 Antivirus 2021 dia programa antivirus mandroso izay miaro aminny hackers, ransomware ary phishing. Mampiavaka azy aminny programa antivirus nentin-drazana hafa izy io satria miaro aminny karazana malware rehetra, ao anatinizany ny viriosy, kankana, spyware, ransomware, ary mitazona fiarovana ambony noho ny tena izy nefa tsy mampihena ny rafitra, manakana ny fanavaozana ny rafitra ary pop-up mahasosotra rehefa milalao lalao na fandefasana fampiharana aminny maody efijery feno. Azonao atao ny manindry ny bokotra Download ESET NOD32 Antivirus etsy ambony hanandrana ny ESET NOD32 Antivirus 2021, iray aminireo programa antivirus tsara indrindra, maimaimpoana mandritra ny 30 andro.
Antsipiriany momba ny Antivirus ESET NOD32
Ny programa ESET nahazo loka, antivirus malaza NOD32 Antivirus, izay mampiasa ny haitao mandroso indrindra toy ny faharanitan-tsaina artifisialy, ny fahalalana ny milina, ny rafitra lazanny rahona, ary nahomby ho lasa iray aminireo orinasa tsara indrindra aminny indostria aminny fahazoana loka avy aminny fanombanana tsy miankina andrim-panjakana, novolavolaina bebe kokoa aminny kinova 2020. Vaovao miaraka aminny ESET NOD32 Antivirus dia ny Scanner UEFI, izay manome fiarovana aminny malware manandrana miditra aminny rafitra alohanny hanombohana ny Windows, ary ny Security Report isam-bolana, izay manome fampahalalana momba ny fandrahonana hita, pejy web nosakanana, nijanona ny mailaka spam, ny fidirana aminny webcam voasakana ary maro hafa.
Endri-javatra ESET NOD32 Antivirus 2021
Legendary NOD32 Antivirus: Miaro anao aminny karazana malware rehetra, ao anatinizany ny viriosy, ransomware, kankana ary spyware.
Fiarovana nahazo loka: napetrakireo mpanombatombana mahaleo tena ny ESET aminireo tsara indrindra aminny indostria. Hita ihany koa izany aminny isa firaketana ny valisoa VB100 anny Virus Bulletin.
Mampiasa loharanom-pahalalana kely aminny solosaina: Ankafizo ny herinny solo-sainao. Milalaova, miasa ary mivezivezy aminny Internet tsy misy fiatoana.
Teknolojia manapaka: Ny fianarana milina avo lenta, ny fikarohana ny ADN ary ny rafitry ny laza miainga aminny rahona dia sasany aminireo fitaovana farany novolavolaina tao aminny foibe 13 R&D anny ESET.
Gameplay sy horonan-tsary tsy tapaka: Tsy misy fanavaozana ny rafitra na pop-up manelingelina rehefa milalao lalao na mihazakazaka programa aminny maody efijery feno.
Antivirus sy Antispyware: Manome fiarovana mavitrika aminny karazana fandrahonana an-tserasera sy an-tserasera ary manakana ny fiparitahanny malware aminny mpampiasa hafa.
Anti-phishing: miaro ny fiainanao manokana sy zava-tsarobidy aminny tranokala scam izay mandray fampahalalana saro-pady toy ny anarana mpampiasa, ny teny miafina na ny antsipirianny banky, na ny fanaparitahana vaovao diso aminny loharanom-baovao toa malaza. Miaro anao aminny fanafihana homoglyph (manova tarehintsoratra aminny rohy)
Advanced Machine Learning (Enhanced): Ny fikarohana ny ADN sy ny rafitry ny laza miainga aminny rahona dia sasany aminireo fitaovana farany novolavolaina tao aminny foibe 13 R&D anny ESET.
Exploit Preventer: manakana sy manafoana ny efijery hidin-trano sy ny ransomware natao manokana hialana aminny fahitana antivirus. Izy io dia miaro aminny fanafihana aminireo mpijery tranonkala, mpamaky PDF, ary rindranasa hafa, ao anatinizany ny rindrambaiko miorina aminny Java.
Scanner Memory Memory Advanced: manome detection advanced momba ny malware maharitra izay mampiasa sosona encryption maromaro hanafina ny asany.
Fizahana an-keriny aminny alàlanny rahona: manafaingana ny scan aminny alàlanny fanoratana anaty fotsy ny fisie azo antoka mifototra aminny tahiry laza laza ESET Live Grid. Manampy aminny fampiatoana an-tsehatra ireo malware tsy fantatra mifototra aminny fihetsiny aminny fampitahana azy aminny rafitry ny laza monina ao anaty ESET.
Scan raha misintona rakitra: mampihena ny fotoana fizahana aminny alàlanny fanovana karazana rakitra sasany, toy ny rakitra arisiva, mandritra ny fizotry ny fisintomana.
Idle State Scan: Manampy aminny fahombiazanny rafitra aminny alàlanny fanaovana scan lalina rehefa tsy ampiasaina ny solosainao. Manampy aminny famandrihana mialoha ny fandrahonana tsy miasa izy ireo alohanny hanisy ratsy azy ireo.
Fanaraha-maso ny fitaovana: Manakana ny fanaovana kopia tsy ara-dalàna ny data manokana ataonao aminny fitaovana ivelany. Ahafahanao manakana ny media fitahirizana (CD, DVD, tsorakazo USB, fitaovana fitahirizana kapila). Ahafahanao manakana ireo fitaovana mifandraika aminny alàlanny Bluetooth, FireWire ary seranana serial / parallel.
Host based Intrusion Prevention System (HIPS) (Enhanced): Ahafahanao manamboatra tsipiriany bebe kokoa ny fitondran-tenanny rafitra, mifantoka aminny fahitana fitondran-tena. Manome safidy hametraka fitsipika momba ny fitrandrahana ala, ny fizotranny mavitrika ary ny programa handaminana tsara ny toerana misy anao.
Fiarovana Ransomware: Manakana ireo malware izay manidy ny angon-drakitrao manokana ary avy eo mangataka anao handoa vola hanafoanana azy.
Scanner UEFI: manome fiarovana aminny fandrahonana manafika ny solosainao alohanny Windows na dia manomboka aminny rafitra miaraka amina rafitra UEFI aza.
WMI Scanner (NEW): Mitady loharano ahazoana rakitra na malware voarakitra ao anaty tahirin-kevitra ao aminny Windows Management Instrumentation, andiana fitaovana izay mitantana fitaovana sy rindranasa ao aminny tontolo Windows.
System Registry Scanner (NEW): Mikaroka rakitra voapoizina na loharanom-pahavitrihana malware tafiditra ao anaty tahiry ao aminny Windows System Registry, tahiry hierarchical izay mitahiry toerana ambany ho anny rafitra fiasa Microsoft Windows sy ny rindranasa mifidy ny hampiasa ny rezistra.
Faritra fampiasana kely ny rafitra: mitazona fahombiazana avo lenta ary manitatra ny fiainana hardware. Izy io dia mifanaraka aminny tontolonny rafitra rehetra. Mamonjy ny bandwidth aminny Internet miaraka amina fonosana fanavaozana kely dia kely izy.
Gamer Mode: ESET Smart Security Premium dia mandeha ho azy aminny fomba mangina rehefa misy programa atao aminny efijery feno. Nahemotra ny fanavaozana ny rafitra sy ny fampandrenesana mba hitehirizana ireo loharano ho anny lalao, horonan-tsary, sary na fampisehoana.
Fanohanana PC azo entina: ahemory ny pop-up tsy fanavotana rehetra, ny fanavaozana ary ny hetsika fandaniam-rafitra hitehirizana ireo loharanom-pahalalana, mba hahafahanao mijanona aminny Internet lava kokoa sy tsy voafatotra.
Vahaolana iray Click: ahafahanao mijery ny fiarovana anao ary miditra aminireo fitaovana be mpampiasa indrindra aminny écran rehetra. Manolotra vahaolana feno sy tsindry iray aminny olana mety hitranga izy io.
Fanavaozana ny vokatra tsy misy olana: araraoty ny teknolojia fiarovana vaovao raha vantany vao misy izy ireo ho anny fiarovana avo lenta hatrany.
Fikirana ho anny mpampiasa mandroso: manome sehatra fiarovana feno mifanaraka aminny ilainao. Ahafahanao mamaritra ny halalinny scanner indrindra, scan bebe kokoa.
ESET SysInspector: fitaovana diagnostika mandroso izay misambotra fampahalalana manakiana avy aminny olanny filaminana sy ny fanarahan-dalàna.
Tatitra fiarovana: fampandrenesana isam-bolana aminny fomba hiarovanny ESET anao (fandrahonana hita, voasakana ny pejin-tranonkala, spam)
Fitaovana fanampiny ilaina
Fiarovana aminny fotoana tena izy
Miasa nefa tsy manambany ny fahombiazanny rafitra.
Fiarovana maro sosona aminny malware
fanavaozana mandeha ho azy
Haben'ny rakitra: 55.00 MB